ब्लग के हो ? यसबाट पैसा कसरी कमाउने ? - ब्लग के हो ? यसबाट पैसा कसरी कमाउने ? -
कमल धिताल १३ पुष २०७७, सोमबार
वास्तवमा कागज पानामा अनलाइन लेख्ने डायरी एउटा ब्लग हो जसमा हाम्रो समाजका गतिविधिहरू र विचारहरू र विचार व्यक्त हुन्छन् । जुन इन्टरनेटमा विश्वका विभिन्न भागहरू मार्फत देखा पर्दछ, जहाँ सल्लाह र प्रतिक्रिया विश्वका सबै ठाउँबाट साझा गर्न सकिन्छ । यसैले, त्यहाँ वेब माध्यममा एक डायरी लेखिएको छ, यसलाई वेब-ब्लग भनिन्छ, जुन छोटो ब्लग हो ।
सबै चीज परिवर्तन हुँदैछ, समयको चक्रमा सबै परिवर्तन हुँदैछ । इन्टरनेटमा पनि यही लागू हुन्छ । प्रारम्भिक पश्चिमी देशहरूमा बढ्दो परिष्कृत इन्टर्नेट टेक्नोलोजी र द्रुत अनलाइन व्यापारका कारण, व्यवसाय व्यवसायको प्रबर्द्धनका लागि विभिन्न वेबसाइट र ब्लगहरू सिर्जना गरिएका छन् र विभिन्न अनलाइन विज्ञापन एजेन्सीहरू र अनलाइन रोजगार एजेन्सीहरूको स्थापना भएको छ ।
यसका लागि सुरुमा गुगलको ब्लगर, वर्डप्रेसजस्ता निशुल्क साइटमा एकाउन्ट बनाउनुपर्छ । पहिला तपाईं निशुल्क ब्लग बनाउन यसमा क्लिक गर्नुहोस । त्यहाँ तपाईंले क्रिएट योर ब्लग देख्न सक्नुहुन्छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोस ।
तपाईं आफ्नो जिमेलको सहायतले अकाउन्ट खोल्नुहोस । अब आफ्नो ब्लगको नाम राख्नु होस । नाम राखिसकेपछी आफुलाई मनपर्ने टेम्प्लेट छान्नुहोस ।
अब तपाईंको ब्लगरमा निशुल्क ब्लग तयार भयो । यदी तपाईंलाई एच.टि.एम.एल को साधारण जानकारी छ भने यहाँले टेम्प्लेटलाई आकर्षक बनाउन सक्नुहुन्छ । अहिले मर्कन्टाइल ।लउ दर्ता निशुल्क रुपमा गर्ने हुँदा आफ्नो नाम को डोमेनमा पनि यहाँले ब्लग बनाउन सक्नु हुन्छ । मर्कन्टाइल .np दर्ता गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।
जस्तै मैले यो मेरो ब्लग ब्लगर साईटमा बनाएको हो जसलाई मैले मर्कन्टाइल ।लउ दर्ता गरेर आफ्नो नामको डोमनमा यसलाई ढालेको छु । तपाईंले पनि सोही अनुरुप आफ्नो डोमन लिन सक्नु हुन्छ । अब वर्डप्रेसको लागी हो भने तपाईंलाई केहि मात्रमा एच।टि।एम।एल जानकारी हुनु जरुरी छ । यदी तपाईंलाई एच।टि।एम।एल जान्कारी छैन भने पहिला निशुल्क वर्डप्रेसडट कम मा गएर ब्लग बनाउन सक्नु हुन्छ जुन अतन्त सजिलो छ ।
यो ब्लग वर्डप्रेसको साईटमा बनाएको हो जुन यहाँ ले हेरेर आफ्नो पनि सोही अनुसार बनाउन सक्नु हुन्छ । त्यसपछि त्यहाँ आफ्नो चाहनाअनुसारको ब्लग डिजाइन गर्नुपर्छ र लेख्न थाल्नुपर्छ । कमाउनका निम्ति आफूले धेरै भन्दा धेरै पाठक भने तान्न सक्नुपर्छ । किनभने जति धेरै पाठकले आफ्नो लेख पढ्छन् उति नै पटक आफ्नो ब्लगमा आएको विज्ञापन हेर्छन् र आफूले उत्तिकै धेरै कमाउन सकिन्छ । त्यसैले पाठकले रुचाउने लेख लेख्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
त्यसैले सकेसम्म अंग्रेजी वा अरू कुनै प्रचलित भाषा प्रयोग गरेर आम्दानी बढाउन सकिन्छ । तर यदि नेपाली मा ब्लग लेख्नुहुन्छ भने फेसबुकके इन्टान्ट अर्टिकलले नेपाली भाषा स्विकार गर्छ ।
आफ्नो ब्लगको ठेगाना दिएर एप्लाई गर्नुहोस । यदी एड्सेन्स पोलिसी अनुसार तपाईंको ब्लग छ भने एड्सेन्स अप्रुभ भएको म्यासेज तपाईंको ईमेलमा केहि दिनमा पठाउछ । एड्सेन्स अप्रुभ भएन भने एड्सेन्स पोलिसी अनुसार ढालेर पुनस् एड्सेन्स एप्लाई गर्नु पर्छ ।
नेपाली भाषा छ भने फेसबूकको इन्स्टान्ट आर्टिकल अर्को आम्दानीको स्रोत हुन सक्छ । ब्लगगिङ सबन्धी अन्य जानकारी यो ब्लगमा गएर लिन सक्नुहुन्छ ।